Nahoma 3 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
3 Lozan’ilay tanàna mpandatsa-dra!+ Feno fitaka sy fandrobana izy, ary tsy mitsahatra miremby. 2 Injay ny feon’ny karavasy+ sy ny fikatrokatroky ny kodiarana! Indreny fa miriotra mafy ny soavaly ary mitontontontona ny kalesy!+ 3 Indreny koa ny mpitaingin-tsoavaly sy ny sabatra mamirapiratra ary ny lefona manjelanjelatra!+ Maro be ny voavono, ary be dia be ny maty. Tsy hita isa ny faty, ka voafingan’ireny ny olona. 4 Nanaram-po nivaro-tena mantsy ilay mpivaro-tena.+ Manintona sy mahay manangoly izy, ary mpilalao ody faran’izay mahay, sy mamandrika firenena maro amin’ny fivarotan-tena ary mamitaka vahoaka maro amin’ny filalaovany ody.+ 5 “Hamely anao aho”,+ hoy i Jehovah Tompon’ny tafika. “Hingaiko hatreny amin’ny tarehinao ny morontongotr’akanjonao, ka hataoko hitan’ireo firenena ny fitanjahanao,+ ary ho hitan’ireo fanjakana ny fahafaham-barakanao. 6 Dia hotorahako zava-maharikoriko ianao,+ ka hataoko famingavinga, sady higagan’ny olona.+ 7 Ary handositra anao+ izay rehetra mahita anao, ka hanao hoe: ‘Voaroba i Ninive! Iza no hangoraka azy?’ Aiza no hitadiavako olona hampionona anao? 8 Fa angaha ianao tsara noho i No-amona+ izay teo amoron’ireo lakandranon’i Neily?+ Voahodidin’ny rano izy, ary ny ranomasina no harenany sady nataony manda. 9 I Etiopia sy Ejipta+ no tena heriny, ary tsy nisy fetrany izany. Ary nanampy anao i Pota sy ny Libyanina.+ 10 Voatokana hatao sesitany koa i No-amona, ka lasa babo.+ Notorotoroina teny an-joron-dalana rehetra teny ny zanany.+ Natao antsapaka+ ireo olo-manan-kajany. Ary nasiana gadra vy daholo ny olona ambony tao aminy.+ 11 “Ho mamo koa ianao,+ ka ho voafina.+ Ary hitady fiarovana any amin’ny fahavalo ianao.+ 12 Ny toerana rehetra voaro mafy ao aminao dia toy ny aviavy misy voany masaka voalohany, izay hilatsaka ao am-bavan’ny mpihinana rehefa hozongozonina.+ 13 “Toy ny vehivavy ny olona ao aminao.+ Ary hisokatra tokoa eo anoloan’ny fahavalonao ireo vavahadin’ny taninao, ary ho levon’ny afo ny bara hidiny.+ 14 Manangòna rano ho anao fa hisy fahirano.+ Hamafiso ny toerana voaro mafy eo aminao.+ Mankanesa eo amin’ny fotaka, ka hosihoseo ny tanimanga, ary raiso ny lasitra fanaovam-biriky. 15 Na eny aza anefa ianao, dia ho levon’ny afo. Ho fatin-tsabatra ianao,+ ary handripaka anao izany, toy ny fandripaky ny zana-balala+ ny zavamaniry. Aoka ianao ho maro be toy ny zana-balala, eny, ho maro be toy ny valala. 16 Efa nohamaroinao toy ny kintana eny amin’ny lanitra+ ny mpivarotra ao aminao. “Ary miofo ny zana-balala, dia lasa manidina. 17 Toy ny valala ireo mpiambina ao aminao, ary toy ny andiam-balala ireo mpiantso olona ho miaramila. Mitoby eny amin’ny vala ny valala rehefa mangatsiaka ny andro. Raha vao miposaka anefa ny masoandro, dia lasa manidina izy ireo, ary tsy fantatra izay misy azy.+ 18 “Rendremana+ ny mpiandry eo aminao, ry mpanjakan’i Asyria ô! Mijanona ao an-tranony ny olo-manan-kajanao.+ Naely eny an-tendrombohitra ny vahoakanao, ary tsy misy mamory azy.+ 19 Tsy misy fitsaharany ny loza manjo anao. Tsy mety sitrana ny ferinao.+ Izay rehetra mandre ny manjo anao dia hitehaka.+ Fa iza moa no tsy nahita faisana tamin’ny haratsiam-panahinao tsy misy farany?”+